Nail Sokiro, Drywall Sokiro, Sokiro Mpamily, Ground Sokiro - Weifeng
Self ary atsofony Sokiro
Ningbo Weiifeng Fastener Co., Ltd dia miorina amin'ny Yuyao City izay mora ny miditra. Mila antsasaky ny ora ny tanàna amin'ny avo Ningbo lalana raha 3 ora Shanghai City. Ny orinasa manokana amin'ny fitaovana ohatra vatofantsika, screws, horonan, voanjo sy ny fitaovana. Ny mpikambana ato amintsika zavatra tsara be dia be ao amin'ny andalana ny amin'io sehatra io fa manolotra entana manara-penitra sy ny vidiny mirary ary koa ny hodinihintsika fanompoana. Ankoatra ny orinasa mpamokatra entana, koa isika rehefa mifandray amin'ny fanafarana sy fanondranana mitarika business.Our vokatra avy isan-karazany, araka ny fitsipika manaraka izao: GB, Din, Jis sy ANSI ary afaka ihany koa mandray baiko hafa toy ny famaritana ny mpanjifa fangatahana faly izahay mba hampitoetra tsara fiaraha-miasa maharitra fifandraisana sambo miaraka amin'ny mpanjifa miorina amin'ny fitoviana sy ny fandraisana soa.
Hex milina fanasan-damba ary atsofony Self Head Screws
Hex flange tena amin'ny milina fanasan-damba ary atsofony visy
lasitra hanisy loha-tena nipaipaika visy
lasitra lohany Phillips Sokiro
lasitra loha-tena nipaipaika screws
Phillips fiara visy
Phillips fisaka loha-tena nipaipaika visy
Address: ampiana hoe: faha-16 Floor, ZhongMu International Mansion, No.398 NanLei Atsimo Road, Yuyao, Zhejiang, Sina